DOWNLOAD Boeing 767-300ER Polish Air-Line FS2004
Boeing 767-300ER Poloney Air-dalana, pejy FS2004 HOT
Boeing 767-300 kalitao LOT avo kalitao, ity add-on dia mila fanamafisana sary tsara. Modely 3D natao tamin'ny antsipiriany. Ny FMC dia miasa ary tontonana 2D tena saro-bahana ho an'ny mpikorontana henjana. Tsy maintsy ho an'ny FS2004!
Ny Lotnicze LOT Polskie Linie (anglisy, LOT Poloney Airlines) (Iată: OL ICAO code: LOT) no pirenena an'habakabaka an'i Polonina. Miorina Mafy eo 1 Janoary 1929, dia iray amin'ireo antitra indrindra eo amin'izao tontolo izao, ny fiaramanidina voalohany nampiasaina dia Junkers F13 (15 gazety) ary Fokker F.Vlla / 1m (6 dika mitovy).
LOT niaraka airline fifanarahana Star Alliance in 2003 ary manana fanampiny EuroLOT, izay manome an-tokantrano sidina tany Polonina.
Ny Boeing 767 dia kambana-maotera karazana fiaramanidina ela ny fipetrany, vokarin'ny orinasa Amerikana Boeing. Ary nanao ny sidina voalohany 26 Septambra 1981. Ny dikan-samy hafa ny 767 mpandeha dia afaka mitondra eo 181 sy ny olona sy ny bateria 375 ny fiainana miovaova hatrany 9400 ho 12 200 km arakaraka ny dikan-sy ny fanahafana ny tarika. Ny Boeing 767 tsy ampy amin'ny telo samy hafa fuselages. Ny voalohany, ny 767-200, niditra fanompoana ao 1982, nanaraka ny 767-300 in 1986 sy ny 767-400ER in 2000. Boeing ihany koa nanjary dikan "Extended Range" (ER) ho an'ny -200 sy -300 dikan, miaraka amin'ny fizakantena bebe kokoa sy ambony payload. Ao 1995, Boeing efa nandidy ny 767-300F, ny freighter dika tanteraka. Hafa koa ny dikan freighter misy, fa izany dia ampiasaina ho an'ny mpandeha dikan 'ny 767 izay niova fo.
Ny 767 voizin'olon-droa dia nitombo tao amin'ny tokan-tena-Ilany aiza no fiaramanidina Boeing 757. Samy fiaramanidina anjara singa maro, indrindra fa eo amin'ny endrika sy ny cockpit ambaratonga. Ny Boeing 767 no voalohany niditra fiaramanidina fanompoana amin'ny mpiasan'ny fiaramanidina ahitana mpanamory roa ihany, izay intsony ny fampiasana ny asa ny fiaramanidina injeniera.
Ao amin'ny 1990s, ny Boeing 767 lasa ny fiaramanidina ampiasaina ho ela indrindra-ny fipetrany fiaramanidina ary matetika indrindra nampiasain'ny airlines ho hamidy ho sidina eo amin'ny Etazonia sy Eoropa. Ao 2009, fitambaran'ny baiko ho an'ny Boeing 767, dikan rehetra, dia vao ny 1000, miaraka 900 fiaramanidina no natolotra. -300 / -300ER Model ny Boeing 767 no malaza indrindra dikan ity fiaramanidina, ary efa ho roa ampahatelon'ny ny fitambaran'ny baiko. Ao 2009, nisy 864 Boeing 767 fanompoana, nozaraina teo 48 airlines.
Septambra 11, 2001, ny andro ny fanafihana tany New York, Boeing roa 767 izay nianjera tao an-kambana tilikambo ny World Trade Center. (Source Wikipedia)
Downloads 17 201
Project OpenSky, 2d tontonana amin'ny Jimmy Richards